Fiovan'ny toetr'andro fanovozana Reef Resilience
Ny fiovan'ny toetrandro dia manondro ny fiovana maharitra eo amin'ny toetrandro izay tratran'ny taonjato maro, na taonjato maro na mihoatra. Vokatry ny fampakarana ny entona voajanahary haingana any an-danitra amin'ny alàlan'ny fandoroana solika fôsily (oh: arintany, solika, ary gazy voajanahary).
Ireo gaza hafahafa ireo dia mampitombo ny Tany sy ny Oseana izay miteraka ny fiakaran'ny ranomasina, ny fiovan'ny oram-baratra, ny fiovaovan'ny ranomandry, ny fiovan'ny rotsakorana, ny ranomandry sy ny ranomandry, ny hetsika hafanana mahery, ny afo ary ny hain-tany. Ireo fiantraikany ireo dia asaina hitohy sy amin'ny toe-javatra sasany, hampitombo, ny fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ny fotodrafitrasa, ny ala, ny fambolena, ny fitaovan'ny rano, ny morontsiraka ary ny rafitra an-dranomasina.
Atmosfera temperatures: 2-4 ° C increase by 2100, mainly due to activity ref
Fitomboan'ny ranomasina: ~ 1 m mitsangana amin'ny 2100 noho ny fiparitahan'ny hafanana sy ny hafanana mangatsiaka. Fanamarihana: mety hampitombo ny halaviran'ny sehatry ny ranomasina ny fandraisana anjara amin'ny ranomandry any Grienelle sy Andrefana ref
Ny fiovana amin'ny lamin'ny oram-baratra - ny fiakaran'ny hafanana dia mety hahatonga ny tafiotra tropikaly maneran-tany hatanjaka kokoa eo ho eo (miaraka amin'ny fitomboan'ny 2-11% hatramin'ny 2100) ref
Ho an'ny fiheverana bebe kokoa ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiantraikany manokana amin'ny haran-dranomasina dia tsindrio Eto. Ho an'ny faritra sy ny faritra, fitarafana eo amin'ny sehatra goavana, jereo ny fizarana Resaka eto ambany.
Fifandonana eo amin'ny toetr'andro sy ny toetr'andro
Weather dia manondro ny toe-piainan'ny atmosfera toy ny hafanana sy ny rotsakorana mandritra ny fotoana fohy (ora vitsivitsy na andro vitsivitsy). Ny toetrandro dia ny zavatra iainanao isan'andro.
Climate dia ny lamina mitovitovy amin'ny toetr'andro ho an'ny toerana manokana mandritra ny fotoana maharitra, matetika farafaharatsiny 30 taona.
Ny fiovan'ny voajanahary eo amin'ny toetrandro izay mitranga isam-bolana, ny vanin-taona, ny taona isan-taona ary ny folo taona ka hatramin'ny folo taona dia antsoina hoe ny fiovaovan'ny toetr'andro (ohatra ny fizotrin'ny vanin-taona mafana sy maina any Pasifika tropikaly tandrefana).
Ny fiovaovan'ny toetrandro eo anelanelan'ny taona dia vokatry ny fahasamihafana voajanahary eo amin'ny atmosfera sy ny ranomasina, toy ny El Niño Southern Oscillation (ENSO). ENSO dia manana dingana roa faratampony: El Niño sy La Niña. Ny El Niño dia mitazona ny rivotra varotra ambany kokoa sy ny toetr'andro mafana kokoa any akaikin'ny ala any amin'ny faritra maro ao Pasifika, fa ny La Niña kosa dia mitarika ny rivotra haingam-pandeha sy ny fe-pahasalamana mafana kokoa.
Ny fihanaky ny rivotra voajanahary dia mitovitovy amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro (izany hoe, ny haintany sy ny tondra-drano vokatry ny ENSO dia mbola hitohy ary mety hivoatra noho ny fiovan'ny toetr'andro. Noho izany, dia tsy maintsy dinihina koa ireo fahasamihafana voajanahary ireo rehefa mikarakara ny hoavy.
Tetikasa fiovan'ny toetrandro ho an'ny: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPalaumanokatra fisie PDF , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoManusmanokatra fisie PDF , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPohnpeimanokatra fisie PDF , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKosraemanokatra fisie PDF , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoYapmanokatra fisie PDF , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoChuukmanokatra fisie PDF , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNosy Marshallmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiovan'ny toetrandro, Extremes ary fanovana any Pasifika tropikaly Tandrefana: Ny siansa vaovao sy ny tatitra momba ny fanavaozana ny firenenamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy valim-pikarohana ara-tsimia ara-paritry ny nosy Pacific (PIRCA)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiovan'ny toetr'andro amin'ny fiovan'ny toetr'andro Karaiba
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSehatry ny governemanta iraisam-pirenena momba ny fiovan'ny toetrandro
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fanentanana momba ny fiovaovan'ny toetr'andro any Australia